သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေး တွေပေါ်နေတဲ့ ချစ်သူ အသစ်လေးရဲ့လက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး ပရိတ်သတ်ကို အလင်းပြလိုက် တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် – Cele Oscar
ပရိတျသတျကွီးရေ…. ဥက်ကာမငျးမောငျဟာ ဆိုရငျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတာဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ သူဟာအမရေိကနျမှာနထေိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျနျော။ဥက်ကာမငျးမောငျကတော့ တဈခါတဈလေ မှာဆိုရငျ မွနျမာပွညျသို့ပွနျလာပွီးအနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျလရှေိ့ပါတယျပရိတျသတျကွီးရေ။ဥက်ကာမငျးမောငျကို ခဈြခငျအားပေးတဲ့ပရိသတျ တှကေတော့ အမရေိကနျမှာနထေိုငျနလေညျး အားပေးခဈြခငျနကွေဆဲပဲဖွဈပါတယျ။
သူဟာဆိုရငျ မျောဒယျတဈယောကျအဖွဈရပျတညျ နတေဲ့ အရမျးကိုမိမိုကျလှနျးတဲ့ခန်ဓာကိုယျကိုပိုငျဆိုငျ ထားပွီး တောငျ့တငျးတဲ့ဗလတှကေလညျညျးပရိတျသတျတှကေိုကွှစေနေိုငျလောကျတဲ့အပွငျ ခြောမောခနျ့ညားတဲ့ရုပျရညျကိုပါပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ဥက်ကာမငျးမောငျဟာဆိုရငျ မိဘအပျေါသိတတျလိမ်မာပွီး မိဘကိုဂရုစိုကျစောငျ့ရှောကျပေးတဲ့ သားလိမ်မာတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျနျော။သူက တော့ အခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့နိုငျငံရေးအခွအေနမှောဆိုရငျလညျး အဝေးတဈနရောကနေ ပွညျသူလူထုနဲ့ အတူ အမှနျတရားဘကျ ကနရေပျတညျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာဆိုရငျလညျး ဥက်ကာမငျးမောငျက ခဈြသူ အသဈရဲ့လကျကလေးကိုစှဲကိုငျထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ပရိတျသတျကွီးကို စပရိုကျလုပျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျနျော။သှေးကွောစိမျးစိမျးလေးတှပေျေါနတေဲ့ဥက်ကာမငျးမောငျရဲ့ ခဈြသူအသဈလေးကဘယျလောကျတောငျခြောနေ မလဲဆိုတာ ပရိတျသတျတှေ ခနျ့မှနျးလို့ရလောကျပါတယျနျော..။ဒါပမေယျ့ ယောကျြားခငျြးကွိုကျနှဈသကျတာကို မနှဈသကျတဲ့ သူတဈခြို့ကတော့ ဝဖေနျအပွဈပွောနကွေတာကိုလညျးတှမွေ့ငျရပါတယျ။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျး ကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာ ဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သူဟာအမေရိကန်မှာနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေ မှာဆိုရင် မြန်မာပြည်သို့ပြန်လာပြီးအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်လေ့ရှိပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ဥက္ကာမင်းမောင်ကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ် တွေကတော့ အမေရိကန်မှာနေထိုင်နေလည်း အားပေးချစ်ခင်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာဆိုရင် မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည် နေတဲ့ အရမ်းကိုမိမိုက်လွန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပြီး တောင့်တင်းတဲ့ဗလတွေကလည်ည်းပရိတ်သတ်တွေကိုကြွေစေနိုင်လောက်တဲ့အပြင် ချောမောခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာဆိုရင် မိဘအပေါ်သိတတ်လိမ္မာပြီး မိဘကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ သားလိမ္မာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။သူက တော့ အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာဆိုရင်လည်း အဝေးတစ်နေရာကနေ ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူ အမှန်တရားဘက် ကနေရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း ဥက္ကာမင်းမောင်က ချစ်သူ အသစ်ရဲ့လက်ကလေးကိုစွဲကိုင်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို စပရိုက်လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေပေါ်နေတဲ့ဥက္ကာမင်းမောင်ရဲ့ ချစ်သူအသစ်လေးကဘယ်လောက်တောင်ချောနေ မလဲဆိုတာ ပရိတ်သတ်တွေ ခန့်မှန်းလို့ရလောက်ပါတယ်နော်..။ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းချင်းကြိုက်နှစ်သက်တာကို မနှစ်သက်တဲ့ သူတစ်ချို့ကတော့ ဝေဖန်အပြစ်ပြောနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း ကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…။